ဘဝမှတ်တိုင်: May 2016
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/31/2016 06:22:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/31/2016 06:16:00 am0comments
Play Store မှာဒေါင်းလို့မရတဲ့ CoC အပါအ၀င် ဂိမ်းတွေ၊app တွေကို ဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်မလဲ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/31/2016 06:14:00 am0comments
Android 4.0x ကနေ 6.x root လုပ်လို့အဆင်ပြေမယ့် Tool လေးဖြစ်ပါတယ် update ထွက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/31/2016 05:53:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/31/2016 05:50:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/31/2016 05:48:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/18/2016 09:27:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/18/2016 09:25:00 pm0comments
Android 2.3 and higher. v1.00.03. ARMv5
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/14/2016 05:28:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/14/2016 05:27:00 am0comments
Battery နဲ့ပါတ်သတ်တာမှန်သမျှကိုဆရာဝန်တစ်ယောက်ကဲ့သို့စောက်ရှောက်ပေးမယ် - Battery Doctor (Battery Saver) v5.14 build 5140001 APK
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/14/2016 05:24:00 am0comments
G730-U00 တွေ ချာဂျင်အဝင်မပြတဲ့အခါ အသုံးတဲ့ မယ်ထင်ပါတယ်။
Credit..by ကို ကို အောင်
April 30 at 9:41pm ·
G730-U00 တွေ ချာဂျင်အဝင်မပြတဲ့အခါ အသုံးတဲ့
MTK တွေမှာချာဂျင်ကို Linear စနစ်နဲ့သွင်းယူပါတယ်။
USB ခေါင်းကနေဝင်လာတဲ့ VCHG 4.8V ဟာ တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ FET လေးခံပြီး ခြေထောက်ခြောက်
ခြောင်းနဲ့ Transistor လေးရဲ့ pin4emitter ကို
ဒီပုံမှာတော့ FET အစားResistor လေးနှစ်လုံးနဲ့
တကယ်လို့ အားသွင်းပုံပြပြီး အားမဝင်ရင်တော့
ပုံမှာမြင်နေရတဲ့ R200 လေးလဲကြည့်သင့်ပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/07/2016 11:27:00 pm0comments
ဖုန်းထဲ မလိုအပ်တော့တဲ့ ဆော့ဝဲတွေနဲ့ Virus ရန်မှလည်း ကာကွယ်ပေးမယ့်- Easy Uninstaller App Uninstall Pro v3.1.5 APK
မိမိတို့ ဖုန်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေကို လက်အညောင်းခံ၊ အချိန်အကုန်ခံပြီး တစ်ခုချင်းစီ ဖျက်ဖို့ မလိုအောင် ပြုလုပ်ပေမယ့် easy uninstaller pro v3.1.5Apk ဆော့ဝဲလ်လေးဖြစ်ပါတယ် .. မိမိဖျက်ချင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ ကို select ပေးပြီး One click လုပ်ရုံနဲ့ ပယ်ဖျက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် …စက်ရုပ်ဖုန်းတွေအတွက် သွင်းထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပယ် ဖျက်ပေးနိုင်မယ့် tool တစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှာပါဘူး….ဒါအပြင် ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုရဲ့ name,version,update time,size စတာတွေလည်း ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Updated သုံးချင်းတဲ့ဘော်ဒါတို့အောက်မှာဒေါင်းပါတယ်။… ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို Android 2.1အထက်များ ဖုန်းတွေကောင်းမွန်းသုံးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/05/2016 07:27:00 pm0comments
ဖုန်းထဲမှာတင်ဒိုးဆက်စကားနိုင်မယ့် ဂိမ်းရယူရန်အောက်က Download ကိုနှိပ်ပါ Download အတန်းပြည့်ပြီးသွားလျှင် My File သို့မဟုတ် Filemanager ထဲက Download ဖိုင်မှာသွားရှာပြီး install ပြုလုပ်ပါ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/05/2016 07:25:00 pm0comments
ဖုန်း၏ Battery သက်တမ်းကြာရှည်ခံစေပြီး performance ပိုကောင်းစေမည့် Hermit App
Android ဖုန်း အတွင်း ရှိ Application တစ်ခုသည် မိမိ ဖုန်း၏ Battery ဘယ်လောက်ကုန်စေသည်၊ RAM ဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်ရစေသည် မှာ အရေးကြီးပါသည်။ Hermit ဆိုသည့် Application တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိမိဖုန်းတွင် အခြား Application များစွာထည့်သွင်းထားရန်မလိုတော့ပဲ Battery ကော Memory ပါ နေရာယူမှု လျော့နည်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hermit ဆိုသည်မှာ Website များကို shortcut အနေနဲ့ ပြောင်းပြီးတော့ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ မိမိ စိတ်ကြိုက် Customize ပြုလုပ်နုိုင်သည့်Application တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါသည်။ Website များမှ ဝင်လာသော Message များ Notification များကိုလည်း ၄င်း Website တို့၏Application များအတိုင်း အသုံးပြုနုိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။
Hermit App ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
အရင်းနီးဆုံးဥပမာပေးရမယ်ဆိုလျှင်တော့ဖုန်း၏ Battery နှင့် Memory များစွာကုန်စေသော ၊ App Reviews များတွင် နှစ်တိုင်း အဆိုးဆုံး App ဆုရသော Facebook Application ၏နေရာတွင်အစားထိုးအသုံးပြုနုိုင်သည့် Application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Hermit သည် Browser များကဲ့သုို့ Custom Tabs များဖြင့် Website များကို ခွဲကာ တကယ့် Web Application တစ်ခုကဲ့သုို့ ကြည့်ရှုနုိုင်တာကြောင့် Browser များကိုလည်း တကုတက အသုံးပြုနေရန် မလိုအပ်တော့ပါ။ Hermit Application Icon ကို Screen ပေါ်တင်ပြီးသည်နှင့် App Drawer ထဲဝင်ကာ Website များကို ဝင်ကြည့်နုိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါသည်။ Hermit သည် အခြား Applicationများကဲ့သုို့ပင် အလုပ်လုပ်ပြီး ၊ Official Application များထက် မလိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လျှော့နည်းစွာ ပါဝင်တဲ့ Application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါသည်။
Hermit App သည် Website များကို App shortcut Icon များဖန်တီးကာ Libraryကဲ့သုို့ သိမ်းထားနုိုင်ပြီး၊ မိမိဝင်ကြည့်လေ့ ရှိသည့် Website များ၏ Icon များကို အလွယ်တကူပဲဖန်တီးကာ Library ထဲတွင် အမြဲသွားကြည့် နုိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း မှတ်ထားသော Website များသည် Hermit App Drawer ထဲတွင် အမြဲ Update သတင်းများ တက်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Website များအတွက်Application များ စွာ အသုံးပြုစရာမလိုတော့ပဲ Battery သက်တမ်းကို တကယ်ပဲ ကြာရှည်ခံစေမှာဖြစ်ပါသည်။ အဓိက အားသာချက်ကတော့ shortcut ပြုလုပ်ပြီးသုံးစွဲတဲ့ App ကို သုံးပြီးသွားလို့ ပြန်ထွက်လိုက်ရင် နောက်ကွယ်ကနေ run နေတဲ့ background process လဲမရှိတော့ ဖုန်းရဲ့ performance ကိုပိုကောင်းစေပါတယ် ။ ထို့ပြင် ဖုန်း ၏ Storage တွင်လည်း Application တစ်ခုစာ နေရာမယူတော့ပဲ Iconတစ်ခုစာပဲနေရာယူမှာဖြစ်ပါသည်။ Hermit Application သည်လည်း ပျမ်းမျှ 1MB လောက်သာရှိပါသည်။
Chrome Shortcut များအစား Hermit App ကို ဘာကြောင့်သုံးရသလဲ
ဖုန်းရဲ့ Chrome browser ကနေလဲ website ကို App shortcut အဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ Home screen မှာတင်ထားလို့ရတဲ့ feature ပါဝင်ပါတယ်။ ထို feature နဲ့ ယခု Hermit App အသုံးပြုပုံနဲ့ ဘာကွာလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ် ။Hermit App ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Third Party Cookies များမှအလိုလျှောက်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါသည်။ ဥပမာ Facebook ကို Hermit မှဝင်မည်ဆိုလျှင် သင့် Facebook ကို မည့်သည့် Application ဖြင့်မျှ Track ပြုလုပ်နုိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် သင့် ရဲ့ Privacy ကိုလည်း ပိုမို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါသည်။ ထို့ပြင် Hermit ထဲတွင် Privacy နှင့် ပတ်သတ်ပြီးCustomize ပြုလုပ်နုိုင် သည့် Option များများစွာရှိပါသေးသည်။
Hermit App ဘာများ လုပ်ပေးနုိုင်သေးလဲ
Hermit သည် Website များမှလာသော Notification များကိုလက်ခံပေးနုိုင်ရုံသာမက၊ Notification လာသည့်အခါဘယ် Website မှလာလျှင့်ဘယ်အသံဖြင့်လာမည်၊ Vibrate ဘယ်လိုတုန်မည်စသည့်ဖြင့်လည်း Customize ပြုလုပ်နုိုင်ပါသေးသည်။ Facebook နှင့် Twitter အတွက် Auto Configuration စနစ်တစ်ခုလည်းပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါသည်။ထို့ပြင့် Website တစ်ခုခြင်းစီအတွင် Photo၊ Location၊ Videos၊ Microphone စသည့်တိုထဲမှမည်သည့် Feature ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးမည်ဆုိုကာ Customize Permission လည်းပြုလုပ်နုိုင်ပါသေးသည်။ထို့ပြင့် Hermit သည်Display ပေါ်ရှိ Font များကိုလည်းပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
Hermit App ကိုတော့ ဒီ Google Play link ကနေ free ဒေါင်းယူလို့ရပါတယ် ။
Download Hermit App
စစခြင်း Lite version level ပဲပေးတဲ့အတွက် website shortcut သုံးခု အထိပဲ ပြုလုပ်သုံးစွဲခွင့်ရှိပြီးတော့ ပိုကဆံပေးပြီးတော့ pro level မြင့်လိုက်ရင် website shortcut ကြိုက်သလောက် လုပ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ် ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/05/2016 07:23:00 pm0comments